Sahityabatika: गायक कुमार कान्छा अब रहेनन
गायक कुमार कान्छा अब रहेनन
माघ ४ , गायक कुमार कान्छाको २०६७ माघ ३ गते निधन भएको छ । मेरुदण्डको पक्षघातबाट पीडित कान्छाको उपचारका क्रममा भारतको मुम्बईमा रहेको रहेजा अस्पतालमा हिजो दिउँसो सवा तीन बजे निधन भएको हो । कान्छाको जन्म बि.सं. २०१४ साल मंसिर २८ गते भएको थियो । मुलघर दैलेख भए पनि बुबा आमा रोजगारीका लागि भारतको कोलकाता पुगेका बेला उहाँको कोलकातामै जन्म भएको थियो । कुमार कान्छाले नेपालका एकसयभन्दा बढी चलचित्रका गित गाउनु भएको थियो ।
उहाँले २ वटा नेपाली गिती एल्बमसमेत निकाल्नु भएको थियो भने लाहुरे, कोशेली जस्ता नेपाली चलचित्रमा अभिनय समेत गर्नुभएको थियो । गायक कान्छाले पिया कर गावँ नामको हिन्दी चलचित्रमा उत्कृष्ट अभिनय गरे बापत भारतमा राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार पाउनु भएको थियो । भारतमै जन्मे हुर्केका कान्छाले त्यहाँका २५ भाषामा १ हजारभन्दा बढी गीत गाउनु भएको थियो । कुमार कान्छालाई हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।
Dautari Admin January 18, 2011 at 6:17 PM
kumar kamcha lai hardik sdranjali.
Aayush January 18, 2011 at 9:52 PM
कुमार कान्छालाई हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।